Mandeha an-tongotra / arabe mandeha ~ Journey-Assist - Fanaraha-maso an-dalambe
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nandeha an-tongotra / arabe mandeha
Nandeha an-tongotra / làlana mandeha tao Pattaya
Famerenana ny lalana an-tongotra any Pattaya
Mandeha amin'ny lalana ao amin'ny sarintany
Ny andro ankehitriny amin'ny lalana Mandeha
Saripika sy horonan-tsary avy amin'ny fandehanana an-dalambe any Pattaya
Hotely akaikin'ny lalana mandeha an-tongotra
Pattaya Nandeha an-dalambe nandinika (hevitra momba ny Google)
Pattaya Walking Street Review (Tripadvisor.com)
"Làlan'ny fanitsiana" ao amin'ny "tanànan'ny ota" 🙂
Pattaya dia antsoina hoe tanànan'ny ota eto amin'izao tontolo izao, ary misaotra an'izay malaza Walking Street / Street Walking izay fantatra eran'izao tontolo izao.
Isan'andro hatramin'ny 19.00, ny Lalana Mandeha dia iray amin'ny arabe mahazatra ao Pattaya, fa aorian'ny 19.00 dia lasa mpandeha an-tongotra manontolo izy io. Eto amin'ity lalana ity ary mifanakaiky dia misy toerana marobe 18+. isan-karazany ny antsoina hoe Go-go bar (go-go), trano fisakafoanana, disko, seho fika, ary ireo andrim-panjakana hafa manolotra fialamboly olon-dehibe
Ho fanampin'ireny fananganana ireny dia somary voafaritra tsara ny arabe ary eto amin'ity fotoana ity dia misy mpivaro-tena be dia be - ankizivavy, mpandalo eny am-pitantanana (Ledyboys) ary lehilahy pelaka.
(Afaka mahita bebe kokoa momba izany ianao eto)
(Azonao atao ny mahita bebe kokoa momba ny fampisehoana toy izany eto)
Mandeha an-tongotra .. voafaritra tsara ilay toerana ary tsy ny rehetra no tia azy. Saingy, io no iray amin'ireo toerana mahasarika indrindra any Thailand, ka tsy azo atao ny tsy raharahany, raha eo akaikiny.
Làlana Bangla / Làlana mandeha
Ary amin'ny lafiny rehetra, any Thailandy dia misy lohahevitra lohahevitra mitovy any Phuket. Niantso izy Làlana Bangla, ary azonao atao ny mianatra momba izany amin'ny an-tsipiriany eto
Pattaya Walking Street amin'ny sari-tany
mahaliana ao Pattaya amin'ny sarintany
Pattaya Walking Street reviews (Tripadvisor.ru)